ကာယပညာသည် ပရောဂျက်တစ်ခုမဟုတ် • musanews
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း အားကစား ကာယပညာသည်စီမံကိန်းမဟုတ်ပါ
ကျွန်ုပ်သည် ကော်ပီကူးထည့်ခြင်းကို နှစ်သက်သူမဟုတ်သော်လည်း အရင်းအမြစ်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိုက်တန်သည့်အပြင် ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသည့်အခါ လူမှုကွန်ရက်များသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဆိုင်ရာ ကွန်တိန်နာများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။
အထူးသဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် မူလတန်းကျောင်းတွင် မော်တော်/ကာယပညာကို ထည့်သွင်းခြင်း၏ အခြေခံကျသော အရေးပါမှုကို လူတစ်ဦး၏ လေ့ကျင့်ရေးလမ်းကြောင်း၏ အဓိက "ဘာသာရပ်" တစ်ခုအဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထောက်ခံသူဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်သည် အပေါက်တစ်ခုအား စောင်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ရန် ကြိုးစားသော အစီအစဥ်နှင့် ရှုထောင့်မပါဘဲ ပရောဂျက်များကို နှောင့်ယှက်သူဖြစ်သည်။
ဆောင်ပုဒ်အပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အဆိုပြုပါသည်။ Attilio LombardozziUniversity Institute of Motor Sciences - Rome Foro Italico, Pedagogue and Methodologist of Sport မှ ပါမောက္ခဟောင်း။
လက်ရှိ စာသင်နှစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် “အားကစား ဒီအတန်း” ထုတ်ဝေမှုအား စိတ်ပါဝင်စားစွာ မျှော်လင့်ထားပြီး အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသော ပရောဂျက်အသစ်ကို ယခင်တစ်ခု၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ် အဆိုပြုထားသည့် “တက်ကြွသောကလေးများကျောင်း” ကို တင်ဆက်ခဲ့သည်။
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် မူလတန်းကျောင်းတွင် ကာယပညာ၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုနှင့် မြှင့်တင်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်ဟု ယူဆပါက ချက်ချင်းသတိပြုသင့်သည်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန် တကယ်တော့ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော ရည်မှန်းချက်များဆီသို့ အပြီးသတ်ရန် စည်းကမ်းကို အသုံးချသည်။. ဤသဘောအရ မြင့်မားသော အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းများကို တင်ပြနိုင်သည့် ဆန်းသစ်သော ရှုထောင့် နှစ်ခုရှိသည်။
1) ပရောဂျက်တွင်ပါဝင်ခဲ့သော အဖွဲ့ချုပ်များထဲမှ အားကစား ဘာသာရပ်နှစ်ခု၏ ကျောင်းများမှ ရွေးချယ်မှု။
2) အဖွဲ့ချုပ်မှ နည်းပညာရှင်များဖြင့် ကျူရှင်ဆရာများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။
ဤရှုထောင့်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် အထူးဂရုပြုထိုက်ပါသည်။
ပထမအချက်က တစ်ခုမှ လာသည်။ ဤယူဆချက်သည် လုံးဝအခြေအမြစ်မရှိဘဲ ကျယ်ပြန့်သည်။ ကာယပညာသည် အဓိပ္ပါယ်အနည်းငယ်သာရှိသော စည်းကမ်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆသောကြောင့် မှန်ကန်သောပံ့ပိုးကူညီမှုများ လိုအပ်နေသည်- အားကစားဆိုင်ရာ စည်းကမ်းအမျိုးမျိုး။
ထို့ကြောင့် အားကစားမဟုတ်သော်လည်း တိကျသေချာသော ပညာရပ်များဖြစ်သည်။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မျှော်မှန်းထားသည့် နယ်ပယ်မှာ ကလေးငယ်များ တက်ရောက်သည့် မူလတန်းကျောင်းဖြစ်သောကြောင့် ရှင်းလင်းချက်မှာ တိတိပပ အရေးမပါကြောင်း၊ "လေ့ကျင့်" ရန် လိုအပ်သော လေ့ကျင့်မှု မဟုတ်ပါ။
ဤကိစ္စတွင်၊ ကျောင်းနေအရွယ်အုပ်စုများနှင့်ပတ်သက်သော သိပ္ပံနည်းကျ ညွှန်ပြချက်အားလုံး ဘက်ပေါင်းစုံမှ ထိပ်တန်းဦးစားပေးအဖြစ် ညွှန်ပြပြီး ထို့ကြောင့် ဘက်စုံ စည်းကမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ပြပါ။ကွဲပြားသောကုသမှုများနှင့် ထိုက်တန်သည့် "နှောင့်နှေးသောစွမ်းဆောင်ရည်" ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ရှိသည်ကိုပင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဤအချိန်တွင် ပညာရပ်နှစ်ခု၏ ရွေးချယ်မှုသည် အလွန်ဆင်ခြင်တုံတရားမဟုတ်သော်လည်း၊ ပြတ်ပြတ်သားသား လှည့်စားခြင်း။.
ကာယပညာကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည် မတည်မငြိမ် ယဉ်ကျေးမှုပုံစံများပေါ်တွင် အခြေခံနိုင်သည်။. အီတလီနိုင်ငံရှိ ၎င်း၏သမိုင်းတွင် အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် ဖော်ထုတ်နိုင်စေမည့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို မီးမောင်းထိုးပြထားပါသည်- (က) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု (စစ်တပ်ကျွမ်းဘား)၊ ခ) ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု (တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုလိပ်စာ); ဂ) ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျော်လွန်၍ မော်တာလှုပ်ရှားမှု (လူသားဆန်သော တိမ်းညွှတ်မှု)။
၎င်းမှာ ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ သာဓကနှင့် လှုပ်ရှားမှု၏ သက်ရောက်မှုရှိသော အတိုင်းအတာအကြား အနီးကပ်ချိတ်ဆက်မှုကို အဆိုပြုခြင်းဖြင့်၊ ကစားခြင်းနှင့် အားကစားကို ကာယပညာ၏ "ပုံစံများ" အဖြစ်သာမက အပိုလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ ကာယပညာ၏ "ပုံစံများ" အဖြစ် အဆိုပြုရန်၊ ဒီအမြင်နဲ့ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ အားကစားသည် "အားလုံးအတွက် အားကစား" ၏ ယုတ္တိနှင့် ကိုက်ညီသော နည်းလမ်းများဖြင့် ကာယပညာကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ (မည်သူ့ကိုမျှ မပါဝင်ပါ။)
ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အခြားသူများ လာ၍ အဆိုတင်သွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ ကျောင်းပါ၀င်သော လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် ရှိနေသည့် အားကစားဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် ပေါင်းစည်းမှုကို ထောက်ခံအားပေးရန် လိုအပ်ပါက ပံ့ပိုးကူညီရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပရောဂျက်၏ အခြားအရေးကြီးသောအချက်မှာ အဖွဲ့ချုပ်မှ နည်းပညာရှင်များ၏ စွက်ဖက်မှု. မရနိုင် ၊ လက်မခံသင့်သော အဆိုပြုချက်။ အဖွဲ့ချုပ်များသည် နည်းပြများအတွက် သင်တန်းများတက်ခွင့်အတွက် အနိမ့်ဆုံးအရည်အချင်းအဖြစ် အလယ်တန်းကျောင်း ဒီပလိုမာကို ယေဘုယျအားဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဘွဲ့ရရန်တောင်းဆိုသော ကျူရှင်ဆရာများ၏ လေ့ကျင့်မှုအတွက် ဤနည်းပြများကို အလုပ်ခန့်ထားနိုင်သည်။
အမှန်မှာ၊ ပရောဂျက်သည် နည်းပညာရှင်များ လိုအပ်သည့် အခြားသော လိုအပ်ချက်များထဲတွင် "ဖြစ်နိုင်ရင် မော်တော်သိပ္ပံဘွဲ့ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း" ဟု ယူဆပါသည်။ "ဖြစ်နိုင်ရင်" ကို "သီးသန့်" အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲကြောင်းသေချာစေရန်လုံးဝလိုအပ်သည်။ အဖွဲ့ချုပ်အားလုံးတွင် ဘွဲ့လွန်နည်းပညာရှင်များ ရှိသည်မဟုတ်ပါ ၊ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် မော်တော်သိပ္ပံဘွဲ့ရ နည်းပညာရှင်များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးပြုရန် အရေးကြီးသည်ဟု မယူဆဘဲ ကျောင်းများတွင် လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင်ရန် မမျှော်လင့်နိုင်ဟု အဖွဲ့ချုပ်များက ပြောသည်။
မီးမောင်းထိုးပြထားသော်လည်း လက်ခံနိုင်လောက်သော ရှုထောင့်များထဲတွင် ကာယပညာ ဟူသော ဝေါဟာရကို ဘေးကင်းစွာ သုံးစွဲခြင်းသည် နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် နောက်ဆုံးတွင် ကျောင်းအဆင့်အလိုက် စည်းကမ်းပိုင်းခြားမှုကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော စည်းကမ်းကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော နိဂုံးချုပ်သည့် အခြေအနေအား ဖျက်သိမ်းရန် ဦးတည်သင့်သည်။"
ဆောင်းပါး ကာယပညာသည်စီမံကိန်းမဟုတ်ပါ မှ အားကစားများမွေးဖွားလာသည်.
ယခင်ဆောင်းပါးSalma Hayek သည်သူမ၏သမီး Valentina ကို Eternals premiere သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်
နောက်ဆောင်းပါးBeyonce နှင့် Jay Z တို့ Venice မှဓာတ်ပုံများ
အပြစ်ပြုသူ, ဆိုဖီယာတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခေါင်းစဉ်
နိုဝင်ဘာ 14, 2020
ကျွန်ုပ်၏စာရင်းစာရင်း ed ။ ၃၅
21ပြီလ 2021, XNUMX